हामी को थियौ, कहाँ थियौ र आज कहाँ पुग्यौ ? – Himalitimes
हामी को थियौ, कहाँ थियौ र आज कहाँ पुग्यौ ?
हामी युवा राष्ट्रका
राजा ठकुरी हुँदा बलिया मगरहरु लिएर नेपाल एकीकरण गरेका थिए। राइ, लिम्बु, गुरुङ अनि तामाङ्गले गोर्खालीको नाममा नेपाल चिनाए। शेर्पाहरु हिमाल चढी नेपाल र नेपालीको शक्ति विश्व सामु देखाए । क्षेत्री सेना पुलिस भएर देशभित्र शान्ति सुरक्षा र धर्मरक्षा गरिरहे। ब्रह्माणहरु देशको सँस्कृति सम्बर्द्धन गर्न, साहित्य लेख्न र प्रशासन चलाउन व्यस्त भए।
देशको व्यापार,व्यावसाय उन्नति गराउन, मौलिक सँस्कृति,जात्रा,पर्व र विधीको इतिहासदेखि आजसम्म यथावत राख्न नेवारहरु धार्मिक र अार्थिक गतिविधिमा व्यस्त देखिन्थे। देशको कलाकृति वस्तुकला, बाजागाजा, पोशाकको जरैदेखि विकाश गर्न सबैभन्दा बढी सिपले भरिपुर्ण जातिहरु तल्लिन देखिन्थे । साथसाथै तराइबासी नेपालिहरु सिमाना रक्षा गर्न आफ्नो ज्यानको बाजि लगाउथे।एउटै धर्मभित्रको छुट्टै सँस्कृति भएको उनिहरुले नेपालको सुनमा सुगन्ध बढाउथे।
नेपाल देश हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि देशको राजधानी मै मस्जिद थियो जुन विश्वभरिमा नै एउटा अनौठो थियो ।, र आश्चर्य पनि । न कोही मुस्लिमलाइ घृणा गर्थे, न उनिहरुलाइ कुनै शंकाले हेरिन्थ्यो । मात्र उनिहरु नेपाली मुस्लिम थिए। अझ राजाबाटै मक्का मदिनामा हज गर्न उनिहरु विशेष बिदाइ पाउथे।
देशमा धार्मिक सहिष्णुकको अवस्था थियो । हिन्दु बुद्धिष्ट र किराँत नेपाली भुमिको मौलिक धर्म थियो,छ र रहि रहनेछ। यी तीन सबै ॐकार परिवारको धर्म हुन । शिव र पार्वती जस्लाइ हिन्दुहरु भगवान मान्छन ठिक त्यही भगवानलाइ किराँत समुदायमा सुम्निमा र पारुहाङको नामले चिनिन्छ। किराँतको बुढासुब्बा र पाथिभरामा सबै हिन्दु बुदिस्ट जान्छन पुजा गर्छन कस्तो सद्भाव थियो।
पशुपतिनाथमा पनि सबै हिन्दु बुद्धिस्ट र किराँती जान्छन पुजा गर्छन र सद्भाव उन्नत अवस्थामा थियो। भगवान बुद्ध जस्लाइ हिन्दुहरु भगवान बिष्णुको सातौ अवतार मान्छन अनि बुद्ध धर्म मान्ने समुदाय उहाँलाइ भगवान मान्छ्न । जुन ठाउँ लुम्बिनी छ जहाँ सबै नेपाली जान्छन र पुजा गर्छन। यस्तो राम्रो धार्मिक सद्भाव थियो । हिन्दु समुदायले गाईलाई देवीको बाहन सम्झेर पुजा गर्दा सबै अरु समुदाय पनि सम्मिलित हुन्थे। बिरोधको कुरा भन्ने छँदै थिएन अनि तामाङ,गुरुङको सँस्कृतिमा सोमरसको प्रयोग हुँदा पुजारी ब्राह्मणहरु विरोध गर्दैनथे न त पण्डितहरु नै बँसाइ सर्थे । सबै सँगै एउटै ठाउमा मिलेर बसेका थियौ होइनन् र ?
तर आज के हुदै ! त्यो भोलिको कहालिलाग्दो नेपाल बन्दै छ। जनजाती समुदाय जस्ले सुंगुर बंगुरको मासु प्रयोग गर्छन अनि ब्राह्मण क्षेत्री प्रयोग गर्दैनन तर पनि कहि कतै विरोध थिएन, किनकी त्यो आस्थासंग जोडिएको कुरा थिएन । नेपाली मिल्नुमै विश्वास गर्ने जनता थिए ।
विडम्बना आज आँगन जोडिएका एक-अर्को नेपाली गाई पुजा गर्ने वा खाने निहुँमा बाँडिदै छन/टाढिदै छन्। जुनकुरा नेपालीभित्रबाट नभई नेपाली सद्भाव बिथोल्ने विदेशी दलालहरुवाट उठेको हो। नेपाल अस्थिर भए र इसाईकरण गर्न सके तिब्बत स्वतन्त्रको नारा लगाउदै चिनको विश्व अधिपत्य ध्वस्त गराउन सजिलो हुने, नेपाली धर्म सँस्कृती निमिट्यान्न पार्न सजिलो हुने र धार्मिक अतिक्रमण गरि नेपालमा इसाई राज गराउने योजना हो ।
याद गरौँ ! तपाइको पैसा हराएको खण्डमा तपाइको इच्छा चाहना र माग मात्र हराउँछ ।,त्यो पैसा आएको खण्डमा फर्काउन मिल्छ। तपाइको घर ध्वस्त भए तपाइको वासस्थान मात्र मेटिन्छ र तपाइ पुनः अर्को घर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइको सम्बन्ध टुटेमा मात्र तनाब आइलाग्छ नयाँ सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्छ । तपाइको शिक्षा मेटिएमा तपाइको चेतनाको आत्मविश्वास मात्र आत्मविश्वास हराउछ ।
तर यदि तपाइको धर्म संस्कृति हराएमा तपाइ स्वयंम आफै हराउँनुहुन्छ। तपाइको पहिचान हराउँछ। तपाइको पुर्खाको ईतिहास हराउँछ । अनि सदियौदेखिको परम्परा हराउँछ, भाषा भेषभुसा हराउँछ । यतिमात्र होइन, तपाईको मौलिकता हराउँछ तपाइको बाबुआमाको स्नेह हराउँछन, उनिहरुको संस्कार हराउँछ, र तपाईं बिल्कुल टाढा बन्नुहुन्छ। जुन बाटो धर्म परिवर्तन को हो त्यो बाटो एकचोटी गएपछि फर्कने सम्भावना समाप्त हुन्छ। होस गरौँ । फर्काउन मिल्ने मात्र परिवर्तन गरौँ ।
(समय सान्दर्भिकताक मानेर हामीले यसलाई हामी युवा राष्ट्रका फेसबुकबाट साभार गरि प्रकासित गरेका हौ )
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २४, २०७५ 2:28:55 AM |
Prevमानव तस्करीको आरोपमा राजदूत शेर्पा बर्खास्त
Nextराष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति लज्जाजनक